कसरी लागि जब कागज आवेदन भर्न| USAHello | USAHello
जब तपाईं को लागि जब लागू, तपाईं कागज आवेदन भर्नका लागि आवश्यक हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी र काम कौशल सूची गर्न आवश्यक हुनेछ. यहाँ भर्नका लागि एक कागज काम आवेदन तपाईंलाई मदत गर्नेछ केही सुझाव छन्.
कागज आवेदन लागि जब लागू गर्न प्रयोग प्रकारका छन्. तिनीहरूले आफ्नो शिक्षा बारेमा सोध्न, कौशल र काम इतिहास. यसलाई सही कागज आवेदन भर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ. किनभने तपाईं आफ्नो जवाफ मेटाउन सक्दैन यो मुश्किल हुन सक्छ. कुनै पनि गल्ती गर्न प्रयास, र सधैं सत्य! यहाँ कागज आवेदन भर्न सजिलो यसलाई बनाउनेछ केही सुझावहरू छन्.
1. एक नमूना काम आवेदन अभ्यास
यो डाउनलोड नमूना काम आवेदन र यसलाई भर्नका. जब तपाईं लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, कागजात खोल्न हुनेछ. यसलाई डाउनलोड गर्न तल तीर प्रयोग.
तपाईं एकपटक यसलाई भर्न, तपाईं एक वास्तविक आवेदन भर्नका लागि तयार छन् जब तपाईं यो उदाहरण प्रयोग. तपाईं आवश्यक जानकारी प्रतिलिपि गर्न राख्न, मितिहरूको जस्तै तपाईं एक कम्पनी मा काम. तपाईँले कसरी थप पढ्न सक्नुहुन्छ जागिर खोज को लागि आफ्नो जानकारी तयार.
2. सधैं कागज आवेदन दुई प्रतिलिपिहरू प्राप्त
तपाईं कागज आवेदन भर्न भने, निश्चित तपाईंले आवेदन को कम से कम दुई प्रतिलिपिहरू प्राप्त. तपाईं कम्पनी जाने हुँदा टिप्न काम आवेदन, दुई प्रतिलिपिहरू लागि अनुरोध. यो बाटो, तपाईं गल्ती बनाउन भने, तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो नियोक्ता लाग्न एक लागि जब तपाईं अभ्यास एक पेन्सिल तर नीलो वा कालो कलम प्रयोग. तपाईं पनि पुस्तकालयमा गएर तपाईंले आवेदन मा लेखन सुरु गर्नु अघि प्रतिलिपि बनाउन सक्छ.
3. कागज आवेदन निर्देशनहरू ध्यान दिएर पढ्न
सम्पूर्ण निर्देशनहरू पढ्नुहोस् तपाईंले सुरू गर्नु अघि. तिनीहरू सही छन् सुनिश्चित गर्न कागज को एक अलग टुक्रा मा आफ्नो जवाफ लेख्न आफ्नो समय लाग्न कागज काम आवेदन तिनीहरूलाई राख्दै अघि.
4. कलम प्रयोग र धेरै स्पष्ट लेख्न
यदि कर्मचारी आफ्नो नाम वा फोन नम्बर पढ्न सक्नुहुन्छ, उनि एक साक्षात्कार लागि कल छैन. त्यसैले आफ्नो जवाफ पढ्न सजिलो राजधानी अक्षरहरू प्रयोग लेखन प्रयास. बाहिर खण्डहरू सबै भर्न सुनिश्चित.
5. तिनीहरूले तयार छन् त आफ्नो उल्लेख सूचित
तपाईं कागज आवेदन मा उल्लेख सूची आवश्यक छ भने, तिनीहरूलाई बताउन तपाईं सन्दर्भको रूपमा तिनीहरूलाई तल लिख छन्. सन्दर्भ गर्ने अघि तपाईंसँग काम गरेको मान्छे हो. तपाईं को लागि लागू छन् के काम तिनीहरूलाई बताउन र काम को लागि के कौशल आवश्यक. यो बाटो, यदि तिनीहरूले तपाईंको आवेदन मा फलो गर्न एक कल वा इमेल प्राप्त, तिनीहरूले तपाईँले प्रश्नहरूको जवाफ तयार गरिनेछ. यदि तपाईं कसैलाई तपाईँले तिनीहरूलाई भनिन्छ सुन्न, तपाईं पछि सहयोगको लागि तिनीहरूलाई धन्यवाद.
6. बनाउन र कागज आवेदन प्रतिलिपि राख्न
लागि कागज आवेदन संग जब लागू गर्दा, कलays प्रतिहरू राख्न. तपाईँ सामान्यतया बारेमा लागि प्रतिहरू बनाउन सक्छ 10 आफ्नो स्थानीय पुस्तकालय मा सेन्ट. मदत माग्न तपाईं प्रतिलिपि मिसिन कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन भने. कम्पनी को नाम लेख्न, तपाईं के काम को लागि लागू र लागू गर्दा. तपाईं एक साक्षात्कार लागि भनिन्छ भने, के तपाईं आफ्नो साक्षात्कार अघि आवेदन मा तल लेखे पढ्न.
7. तपाईं कम्पनी आफ्नो आवेदन ल्याउन गर्दा तरिकाले पोशाक
लागि कागज आवेदन संग जब लागू तपाईंले तिनीहरूलाई मेल वा तपाईंको कर्मचारी तिनीहरूलाई ल्याउन आवश्यक. तपाईं कम्पनी गर्न आवेदन ल्याउन गर्दा तरिकाले पोशाक. तर, लामो-sleeved शर्ट लगाउने, पोशाक प्यान्ट, र पोशाक जूता. महिलाको लागि, राम्रो पोशाक लगाउने, काम ब्लाउज एक स्कर्ट, पोशाक जूता वा एक सूट. यसलाई बन्द गिर जब, तपाईं पूरा सबैलाई विनम्र हुन. सम्झनु, अमेरिकी संस्कृति मा, यो मुस्कान राम्रो छ. तपाईं आइपुग्दा मुस्कान, र सोध्न व्यवस्थापक उपलब्ध छ भने. व्यवस्थापक उपलब्ध छ भने, तिनीहरूलाई बताउन तपाईं आफ्नो काम आवेदन बन्द गिर रहे र तपाईं काम मा धेरै रुचि. मुस्कान र तिनीहरूलाई धन्यवाद भन्छु.
8. तपाईँको फोन जवाफ निश्चित र आफ्नो इमेल जाँच
यो संस्था एक साक्षात्कार लागि केही मानिसहरू सबै आवेदन हेर्न र त्यसपछि हुनेछ. तपाईँको फोन जवाफ तपाईंलाई कल गर्दै छ कि नम्बर पहिचान हुँदा पनि निश्चित हुन. तपाईँले सक्छन् रूपमा आफ्नो भ्वाइसमेलहरू सुन्न र चाँडै फिर्ता कल. आफ्नो इमेल जाँच अक्सर त्यसैले तपाईं एक साक्षात्कार लागि तपाईँको निमन्त्रणा सम्झना छैन. एक कर्मचारी एक साक्षात्कार रुचि छ भने, तिनीहरूले तपाईं सोध्न समय मा आउन आफ्नो सर्वश्रेष्ठ के. तिनीहरूलाई पुन: तालिका बनाउन छैन राम्रो छ. यदि आपतकालीन छ तपाईं मात्र गर्नुपर्छ.
9. लागि जब लागू गरेपछि फलो
यदि तपाईं आफ्नो कागज आवेदन पेश दुई हप्ता भित्र फिर्ता सुन्न छैन, यसलाई तपाईंको आवेदन को स्थिति सोध्न कल वा कर्मचारी इमेल ठीक छ. तर, तपाईं सुन्न छैन भने यो सामान्य हो, त्यसैले दिन छैन अप. हाकिमहरूले हरेक स्थिति को लागि काम आवेदन धेरै प्राप्त कि उपलब्ध छ. तिनीहरूले सबैलाई कल गर्न समय छैन. अपडेट प्राप्त गर्न सक्षम छौं भने पनि कागज आवेदन अन्य जब लागि आवेदन जारी राख्न. तिनीहरूलाई को एक अन्ततः एक साक्षात्कार लागि सम्पर्क गर्नेछौं.
भर्नका लागि कसरी काम आवेदन बारेमा एक भिडियो हेर्न
तयार पेशेवर उल्लेख सूची प्राप्त